Author: shwe yi
စစ်မှုထမ်းပြီးနောက် အရမ်းကို ခန့်ညားလာတဲ့အပြင် စစ်မှုထမ်းပြီးပြီးချင်း ပထမဉီးဆုံး ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ‘A Korean Odyssey’ (Hwayugi) လို့လူသိများတဲ့ Drama နဲ့ ဝက်ဝက်ကွဲ အောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက် စွယ်စုံရအနုပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ ကိုယ်တွေရဲ့ “မျောက်”လေးက Idol Program တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ‘Produce 48’ မှာ National Producer အဖြစ် ပါဝင်ဉီးလာဉီးမှာပါတဲ့နော်။ ပြီးတော့ “ဝက်” လေး Hongki ကလည်း Vocal Trainner […]
FeaturesJ-PopK-PopPeopleLeaveacomment
Idol Rapper နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော Idol Rapper တွေဖြစ်ကြတဲ့ 2PM ရဲ့ Leader ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Jay Park နဲ့ Block B Leader Zico တို့ကတော့ လုံးဝချန်ထားလို့မရတဲ့ Idol နှစ်ဉီးပါလေနော့်။ သူတို့နှစ်ဉီးလိုပဲ အဖွဲ့ထဲမှာ Rap Position ကိုယူထားပေမယ့် သီချင်းဆိုလိုက်ပြန်တော့လည်း မထင်ထားလောက်အောင်ကိုကောင်းနေတဲ့ Idol များစွာရှိနေပါသေးတယ်။ ကဲ.. ဘယ် Idol တွေဖြစ်မလဲ~ […]
FeaturesK-PopLeaveacomment
Idol ဆိုတာ ရုပ်လေးပြစားနေတယ်ဆိုတဲ့ အမြင်တွေကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ခဲ့တဲ့ Idol များ!
On April 25, 2018 April 25, 2018 By shwe yi
Kpop ရဲ့ အမိမြေဖြစ်တဲ့ Korea မှာတောင် Idol လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ရုပ်လေးပြစားပြီး Fan တောင်းနေတဲ့သူတွေပါဆိုတဲ့ အတွေးအမြင်မျိုးတွေရှိနေဆဲပါပဲ။ Idol တွေရဲ့ Fandom တွေဘယ်လောက်များများ ၊ ဘယ်လောက်ပဲ World Wide fan တွေ အများကြီးပဲ ပိုင်ဆိုင်ထားပါစေ Idol ဟာ Idol ပါ အဆိုတော်ဆိုတာကတော့အဆိုတော်ပါပဲ ဆိုတဲ့သူတွေလဲ အများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။ တကယ်တော့အောင်မြင်တဲ့ Idol တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် ကြာရှည်လွန်းတဲ့ Trainee […]
Music Newskpop2 Comments
EXO-CBX ကြောင့် KONA electric SUV Pre-Order တွေကို ရပ်ပစ်ခဲ့ရတဲ့ Hyundai
On April 24, 2018 April 24, 2018 By shwe yi
အဖြစ်ကဒီလိုပါ Hyundai ရဲ့ KONA electric SUV ကို မကြာသေးခင်ကပဲ Come Back ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Global Star EXO ရဲ့ Subunit EXO-CBX နဲ့ ကြော်ငြာထားတဲ့ Video လေး ထွက်ရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း Hyundai ရဲ့ KONA electric SUV ဟာ Popular ဖြစ်လာပြီး Pre-Order တွေကို ရပ်ပစ်ခဲ့ရပါတယ်။ Hyundai က […]
Music NewskpopLeaveacomment
Idol Group တစ်ခုဖြစ်တဲ့ BTOB ရဲ့ အဖွဲ့ဝင် Changsub က သူတို့ရဲ့ Fan တွေကို Surprise လုပ်တဲ့အနေနဲ့ Fan Group Chat Room ထဲဝင်ပြီးတော့ သွားစကားပြောမယ်ဆိုပြီး အရင်ဆုံး သူ့ကိုယ်သူစတင်မိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ “ကျွန်တော်ကတော့ Lee Changsub ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို Chat Room တစ်ခုရှိတယ်ကြားလို့ -” ဆိုပြီး စာရိုက်ရင်း တစ်ဝက်တစ်ပျက်မှာပဲ Group Chat […]
Kpop Idol Group တစ်ခုဖြစ်တဲ့ NCT ရဲ့ Video ကို IG မှာ တင်ခဲ့တဲ့ Chris Brown
On March 26, 2018 March 26, 2018 By shwe yi
မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့မှာ Chris Brown ကသူ့ရဲ့ Sensei သီချင်းကို Kpop Idol Group တစ်ခုဖြစ်တဲ့ NCT က Dance Cover လုပ်ထားတဲ့ Video ကို သူ့ရဲ့ Instagram မှာ တင်ထားခဲ့ပါတယ်။ Caption အနေနဲ့ ဘာမှမရေးထားပေမယ့် Video view က 18 Millon View ထိရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချို့တွေကလဲ Chris […]
အားလပ်ရက်မှာ သီချင်းကောင်းကောင်းလေးတွေနားထောင်လို့ရအောင် Mnet Real Time Music Chart ရဲ့ မှာ Top3နေရာမှာရှိနေတဲ့ သီချင်းလေးတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ ပထမ List ကတော့ ယနေ့ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့အတွက် Top3နေရာမှာရှိနေတဲ့ သီချင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ 1. Sudden Shower (Yong Jun Hyung [Feat. 10 cm]) […]
အပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းခဲ့ကြတဲ့ နာမည်ကြီး K-Pop Idol Girl Group များ!!
On March 22, 2018 March 22, 2018 By shwe yi
ဒီအပတ်မှာတော့ အရမ်းကိုအောင်မြင်နေပေမယ့်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အြပီးတိုင်ဖျက်သိမ်းခဲ့ကြတဲ့ K-Pop Girl Group လေးတွေအကြောင်း ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ K-Pop ဆိုတာကို သူတို့တွေရဲ့ သီချင်းတွေကမှတစ်ဆင့် စသိလာတာဆိုတော့ အကြိုက်ဆုံး အဖွဲ့တွေဖျက်သိမ်းခဲ့ကြတာ တကယ်ကိုပဲ နှမျောခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာမှ လုံးဝကို နာမည်ကြီးပြီး Global Idol တွေဖြစ်နေပေမယ့် လမ်ခွဲသွားကြတဲ့ Idol Group7ခုအကြောင်းကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ 1. Wonder Girls Wonder […]
အဖွဲ့ပြိုကွဲတော့မယ်ဆိုတာကို လက်မခံနိုင်ကြလို့ နေကြာပန်း ကိုယ်စီနဲ့ အသံတိတ် ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ JBJ Fandom
On March 19, 2018 March 22, 2018 By shwe yi
လွန်ခဲ့တဲ့လကပဲ JBJ က Agency နဲ့သူတို့ရဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းကို ထပ်တိုးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေ တက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုတစ်ခါပြန်ကြားလိုက်ရပြန်တဲ့ နောက်လ April လကုန်ရင် အဖွဲ့ကို အပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြီးက Fan တွေကြားမှာတော့ တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းစရာ သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင် သူတို့ရဲ့ သီချင်းတွေနဲ့ Activities တွေကို စဉ်ဆက်မပြတ် တွေ့မြင်ချင်ကြတဲ့ အခိုင်အမာ Fandom ကြီးကလည်းရှိနေပါပြီ။ အခုလို Agency နဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားလို့ အဖွဲ့ပြိုကွဲတော့မယ်ဆိုတာကို […]
‘It’s Dangerous Beyond The Blankets’ ဆိုတဲ့ MBC ရုပ်သံလိုင်းရဲ့ Variety Program တစ်ခုကတော့ နယ်ပယ်အစုံက အနုပညာရှင်တွေနဲ့အတူ အိမ်တစ်အိမ်တည်းမှာနေပြီး တစ်ဉီးနဲ့တစ်ဉီး ရင်းရင်းနှီးနှီးလုပ်ဆောင်ရမယ့် Activities တွေနဲ့ အားလပ်ရက်တွေကို အတူဖြတ်သန်းရမယ့် အစီအစဉ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Variety Program ရဲ့ Season 1 ကို သြဂုတ် ၂၀၁၇ ကစတင်ခဲ့ပြီး Cast member တွေအဖြစ် Xiumin […]